UMnu cwaka, The Eyona Innovative Pool Heat Pump kwi Interbad 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
UMnu cwaka, The Eyona Innovative Pool Heat Pump e Interbad 2018
Eli lixesha lethu lokuqala ukuya Interbad e Stuttgart, eJamani. Enkosi nonke uthathe ixesha lakho kutyelela umnquba yethu. Eli lithuba elikhulu ukuze bamane kwabelana babelane iingcinga kunye namava malunga pump ubushushu inverter pool kunye nabathengi ehlabathini lonke. Thina ongazenzisiyo ngomdla wabo kuyilo slab inverter yethu ekhethekileyo - uMnu Thulisa.
UMnu cwaka na impompo kakhulu ezintsha ubushushu echibini yonke mboniso. Kuye kwaqatshelwa kakuhle ngabathengi abavela kumazwe ohlukeneyo umboniso. odolo eziliqela uqinisekisiwe kwi ndawo, nto leyo eye yakhuthaza kakhulu kuthi.
Kutheni nguMnu cwaka imveliso kakhulu ezintsha?
Ngenxa abayili zethu mveliso. It is a iqela ecenga abafuna ukwenza ixabiso kubathengi bethu kunye nabathengi. Simple yakudala isilawuli kwebala, egadini uyilo umphezulu tyaba lobuhlobo ... Zonke iinkcukacha okhonza ngenxa yesizathu nje omnye: ukwenza amava yabathengi kakhulu. Emva oluvela kunye ukuzama ezintsha, le mveliso kakhulu ezintsha ekugqibeleni wazalwa, apho watshintsha ngempumelelo iingcinga of pump ubushushu inverter pool yemveli.
Ngaphezu koko, siye uwalungise ngempumelelo iqabane kuphela eJamani ngexesha show. Oko kuthetha ngezinto zasekuhlaleni kunye nabanini ivenkile pool unako ukuthenga uMnu Inzolo ngqo eJamani! Ukuba unomdla uMnu cwaka, kodwa akaba nako ukuhlangabezana nathi Interbad, musa ungaphoswa ngaphandle bonisa yethu elandelayo, Piscine Global Europe 2018 e Lyon, eFransi. Yiza uze uthethe nathi ubuso ngobuso, uya kufunda ngakumbi malunga uMnu cwaka kunye nentsapho yethu inverter.
Makhe ukubamba ithuba INVERTER kunye, ndinibone kwi njengexhobongo 5D126 e Lyon!
ixesha Post: Oct-31-2018